Ahoana Mpianatra Travel By Train In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Ahoana Mpianatra Travel By Train In Eoropa
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 27/11/2020)
Mpianatra Travel By Train any Eoropa tsy hahafinaritra ihany, fa ny fianarana sady mahafa-po, koa. Na dia zava-dehibe kokoa fa maro ny mpianatra (ary ny ray aman-dreny) mahalana vao mieritreritra ny dia rehetra azo ampiharina, fahaiza-manao mpianatra ny fiainana fitantanana mila mianatra mba ho lasa mahaleo tena, tena tarihin'ny, tompon'andraikitra, mikaroka grownups! Solo Mpianatra Travel By Train any Eoropa dia afaka hampiseho aminao fotsiny zava tsara tarehy.
Ny fianarana mba hitety ny Fiainanao Manokana, amin'ny ankapobeny, dia toy ny zava-dehibe ho fantany izay ny fandaharam-potoana ho Oniversite. Tsy afaka mieritreritra ny mahazo ny A mahitsy, raha tsy fantatrao ny fomba hisambotra ny fiaran-dalamby, mitantana teti-bola, na koa diovy ny fitafianao! Fomba tsara hianaranao momba ny tenanao mandritra ny fotoana mahafinaritra dia ny mandeha lamasinina any Eropa. Izany amin'ny alalan'ny lavitra ny fomba tsotra indrindra hahazoana manodidina ary manana fotoana ianao vao hahalala raha mitoetra ny hetsika manaraka nankafy tsara tarehy fijery. Noho izany, haka ny diany ka mianara izay hevitry izany toy ny avy any amin'ny tontolo tena izy. Izahay efa nanome anareo ny sasany hevitra izy mba hahafahanao manomboka.
Ny voalohany Mpianatra Travel lamasinina dia: Ankafizo A Session By The Seine
Ny fitsangatsanganana ataon'ny mpianatra amin'ny lamasinina any Eropa dia tsy vitan'ny mahafinaritra mahafinaritra fotsiny fa raha mahay ianao dia afaka maimaim-poana koa! Nisy zavatra izay tena tsy fahita firy ao Paris! Haka vitsivitsy mora divay eran'ny tavoara sy ny loha tsy mahazo manao amin'ny Seine hankafy ny kalazalahy ny vokatra eo amin'ny sehatra Jazz Paris. Mpianatra Travel By Train ho any Paris no faran'izay mora, na dia tsy miteny ny fiteny!
Tsidiho ny Frederick Chopin, Jim Morrison, Edith Piaf, ary Oscar Wilde ao amin'ny Pere Lachaise Fasana in Paris, Frantsa
Tsy manome tsiny anao raha ny hevitrao dia izy no kely hafahafa, fa Pere Lachaise fasana raha ny marina tena lehibe! Tips: Entry dia maimaim-poana; misintona sarintany amin'ny telefaona findainao na amin'ny takelaka alohan'ny handehananao hitady ireo fasana malaza.
Care 4 Orsa in Kroasia
Mpianatra Travel By Train any Eoropa dia mety ho mihoatra noho ny fahafinaretana fotsiny. Amin'ny maha-mpianatra, zava-dehibe ny haka ny fotoana hahitana ny filan'ny nofo, na fotsiny no hampody! Raha manam-potoana mihoatra ny fety, fa nahoana no tsy? Raha tadiavinao ireo fotoana tsara mihevitra-, maka ny fotoana nandeha lamasinina ho any Kroasia sy ny fitsidihana Kuterevo. Ny mpitsoa-ponenana toby ho an'ny orsa volontsôkôlà izay mila fanampiana mba ho indray niditra tao an'ala. Ankafizo milalao, sakafo, na mijery fotsiny ireo biby tsara tarehy ireo.
Ho voahodidin'ny lolo ao Amsterdam ny Zoo, Holland
Raha izahay momba ny lohahevitra natiora, ny fijanonana manaraka dia ny zoo an'i Amsterdam. Any amin'ny zoo tanàna dia trano fandraisam-bahiny lehibe feno lolo tsara tarehy. A tena tsy manam-paharoa traikefa. Ny Zoo Manana biby hafa koa, toy ny sloths, kangaroos, ary ny jagoara! Soso-kevitra: Amin'ny fahavaratra dia misokatra izy io mandra-pilentiky ny masoandro ary manana rindran-kira 6-8 am-divay.
Misotroa amin'ny Igloo, toa karazana, amin'ny The Absolut Ice Bar in Stockholm, Soeda
Ny Ice Stockholm Bar, izay nisokatra in 2002, angamba no malaza indrindra any Soeda toaka attraction. Ary nisarika 70,000 mpitsidika ny herintaona, no asongadina ao amin'ny BBC sy CNN, ary efa toy izany falehan'ny olo-malaza toy ny Pierce Brosnan sy Soeda ny Stellan ny Skarsgård. Ity toerana ity no tena manome dikany vaovao ny andian-teny “eo ambony vatolampy” Hamita ny zava-nitranga, ireo zava-pisotro mihitsy aza nanompo tany hollow ranomandry cubes, amin'ny fisotroana vita tamin'ny biriky mazava ranomandry! Nahoana raha hanitatra ny Mpianatra Travel By Train any Eoropa amin'ny alalan'ny fampiharana ny fialan-tsasatra ho an'ny asa eto. Raha mpianatra ianao, izao tontolo izao dia tena ny oyster.
Tsidiho ny Bruges, Belgium like other Student Travel by Train
Hanomboka eny ny hijanona eto Belzika tamin'ny fitsidihana an'i Bruges. Bruges dia tanàna kely miorina ao atsinanan'i Belzika. Sary cobbled sakeli-dalana eto sy manonofinofy toy lakandrano, sy ny tsena efamira Nilahatra amin'ny tilikambo mahatratra, fiangonana manan-tantara, na antitra voalalotra fotsy almshouses. Misy manokana hatsarany in lohataona rehefa milamina daffodils karipetra ny tokotany ny manan-tantara begijnhof fisintahana, na in ririnina (afa-tsy Noely) rehefa afaka manana ny asa lehibe raha ranomandry, tanàna iray efa ho ny tenanao.
fitsidihana delirium Cafe
Raha toa ianao Mitady bebe kokoa ny antoko, Dia hitsambikina eo amin'ny fiaran-dalamby ho any Brussels toy ny hafa mpiara-mianatra Travel lamasinina, and visit delirium Cafe izay manana 2500 karazana labiera amin'ny paompy! Fa tena mora ny mahita. Tsy afaka malahelo ny nalaza ratsy Delirium famantarana ny elefanta mavokely.
Mandehana any amin'ny antoko ao amin'ny Ibiza, Espaina
Misy zavatra azonao ihany no afa-maina, raha tanora ianao, nifety ny alina(S) lasa in Ibiza dia iray tamin'izy ireo! Hitsambikina eo amin'ny fiaran-dalamby ho any Ibiza ao amin'ny fanokafana na famaranana herinandro fa tena traikefa! These two weeks, ny fanokafana mitranga in May sy ny famaranana tamin'ny Aogositra / Septambra, hampiantrano be iraisam-pirenena avy amin'ny mpanakanto rehetra manerana izao tontolo izao.
Mandeha nosy, Eoropa Lehibe Indrindra Music Festival In Budapest, Hongria
Raha toa ianao be mpankafy ny mozika fety dia tokony ho laharam-pahamehana Sziget. Isan-taona, nandritra ny herinandro ity fetibe milalao eny ny asa iraisam-pirenena goavana Azonao atao na ny amin'ny toby izany, na hijanona ao Budapest izay fotsiny indray mitora-bato, ka levona tahaka ny fety atao amin'ny nosy iray ao afovoan-tanàna! and many students like you Student Travel by Train there.
Mandehana Masina Hunting In Edinburgh, Scotland as a Student Travel by Train
Far ambany ny sahirana Edinburgh arabe misy lainga ny maizina, mangina, hadino toerana. Tamin'ny tapaky ny taona 1980 dia napetraka ny Underground Vaults no hita - efi-trano izay efa intsony efa ho roan-jato taona. Ireo efitra maizina mahafinaritra dia naorina fahiny vato Edinburgh, amin'ny arched tafo, fireplaces, ary 18tamin'ny taonjato faha-divay vaults. raha tsy mino ny matoatoa fitsidihana ity no mahatonga ny tantaran'ny Edinburgh tena mahaliana. Izany no tanteraka mendrika ny 13 quid (11 raha mpianatra ianao!).
Train Eoropeana maro Tours mba haka, toy izany toerana maro ho raiki-pitia amin'ny! Nanolotra anao izahay topimaso fotsiny ny zavatra mety mitsidika toy ny mpianatra Travel amin'ny Train. Tsidiho ny tranokala Save A Train and travel to any place your heart desires in Europe.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fstudent-travel-by-train%2F- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / en mba / ru na / tr sy ny maro hafa fiteny.
#fun europeantravel mpianatra mpianatra TrainStation Train Travel Travel